April 2019 - Page 2 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 23, 2019 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado kulan la yeeshay safiirka Sucuudiga u qaabilsan Soomaaliya. Kulanka oo ka dhacay xarunta safaarada ee magaalada Nairobi ee Kenya, ayaa madaxweyne Deni iyo […]
April 22, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah u safray dalka Masar. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Villa Soomaaliya, madaxweynaha ayaa halkaas uga qeybgali doona shir deg-deg ah […]
April 21, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha cusub ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah xafiiska kala wareegay guddoomiyihii hore Bashiir Ciise Cali kaasoo dhowrkii sanno ee lasoo dhaafay xilka hayay. Guddoomiyaha cusub ee bankiga dhexe, […]
April 20, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya. Duqeynta ayaa Jimcadii ka dhacday deegaanka Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, sida taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay bayaan ku […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s former parliament speaker died on Saturday morning in Garowe town, parliament sources told Puntland Mirror. Abdirashid Mohamed Hersi has been sick for the past few days, according to the sources. He was […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa saakay oo Sabti ah ku geeriyooday magaalada Garoowe, sida eheladiisa iyo ilo-wareedyo katirsan baarlamaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Cabdirashiid ayaa maalmihii […]
April 19, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland ayaa laga yaabaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Ilo-wareedyo katirsan Puntland ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay […]
April 18, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah soo saartay war-saxaafadeed ay uga jawaabayso hadalkii wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Bare ayaa Arbacadii sheegay in Puntland ay […]
April 17, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay qarax galabta oo Arbaco ah ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan booliiska iyo caafimaadka. Qaraxa ayaa dhacay kadib markii gaari laga soo buuxshay […]
April 16, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dilka Mareykanku uu u geystay hoggaamiye ku xigeenkii maleeshiyada ISIS ee gudaha Puntland, Soomaaliya, waxay wiiqaysaa awooda kooxda si ay weeraro uga geystaan deegaanada Puntland, sida uu sheegay wasiirka amniga. “Waxa uu ahaa […]